VOT : NY FILOHA RAVALOMANANA MIVERINA SY MIROTSAKA NO VAHAOLANA – MyDago.com aime Madagascar
Nanohy ny hetsika fitetezana ireo fokontany eto andrenivohitra omaly ny Vondron’Olon-Tsotra (Vot). Teny amin’iny faritar Bekiraro iny no nanatontosana izany. Arakan y nambaran’ny filohan’ny VOT Zoé Sarah dia fanentanana sy fampita-mbaovao no natao tamin’izany indrindra ny taorian’ny fihaonana nataon’izy tamin’ireo masoivoho isan-tsokanjiny. Fanentanan ny olon-tsotra handray andraikitra hoy izy amin’ny raharaham-pirenena ary mampahafantatra azy ireo fa ny vahoaka no tompon’ny zavatra rehetra atao eto amin’ny firenena. Tsy misaraka amin’izay fanentanana izay hoy Sarah, ny fanabeazana ny olom-pirenena mba hijoro handray an-tanana ny ho avin’ny firenena. Ny fanamafisana amin’ny vahoaka ny fitakiana ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana Marc ary milatsaka ho fidiana, ny fitakiana ny famoahana ny gadra politika. Zo sy adidintsika hoy izy ny mitaky ny zontsika izay nohitsakitsahan’ny sasany amin’ny fomba maloto. Tsy hiandrasana ny mpanao politika izany hoy izy izany fa mila mandray andraikitra isika. Nanambara ihany koa Sarah fa ny olontsotra foana no mizaka ny vokandratsin’ny hetraketraky ny mpanao politika. Ny vahoaka hatrany no poretina hatramin’izao. Nararaotin’ny VOT io fotoana nitetezana an’i Bekiraro io mba hanapiana ireo vahoaka tena sahirana. Nanolotra vary sy kahie izy ireo teny an-toerana ka samy nahazo izany ireo olontsotra tena hiajadian’ny fahantrana teny amin’ny manodidina.
Miverina ny Filoha Ravalomanana ary mirotsaka hofidiana indray !
VOT : VAHAOLANA NY FIHAONANA EO AMIN-DRAVALOMANANA SY RAJOELINA
Auteur Solo Razafy*Publié le 28 octobre 2012 Catégories Politique
5 pensées sur “VOT : NY FILOHA RAVALOMANANA MIVERINA SY MIROTSAKA NO VAHAOLANA”
28 octobre 2012 à 17 h 56 min
Mankasitraka Tompoko o!!deraina manokana mihintsy ny hetsika
hataonareo fa tena tia Tanindrazana tokoa raha ianareo dia misaotra
ny mpitarika indrindra ,hafa ihany oah ny vehivavy eeeeeeeeeeee
28 octobre 2012 à 19 h 33 min
Ary Marc Ravalomanana ary ahoana?
la violence n'amène que la violence dit :
30 octobre 2012 à 18 h 15 min
olona 30 maximum no hita eo aminy le sary ; mba manao fanampiana ve de kely otran’izany dia asiana commentaire lava be otran’io? tsy nihena my mahantra talohan’ny 2009 raha tena vaholana ny fiverenany dia rehefa jerevana ny zavatra navelany teo , tsy misy raisina na ny kely aza !!
1 novembre 2012 à 18 h 24 min
août sy fifidianana ho tanteraka eto MADAGASIKARA raha tsy milatsaka ho fidiana ny
filohan’ny Firenzna RAVALOMANANA MARC
Ary raha tsy tafody Antanindrazana izy dia tsy hafaka midoratra ho fidiana !
Izy no fipetraky by olana amin’izao fotoana izao
Io fahazoan’ ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC dia efa voasoritra ao amin’ny ACcords de MAPUTO nosoniavin’ny Ankolafy efatra tamin’ny 09 août 2009 !
Ny Ankolafy efatra no nihena isa , fa ny Accords tany MAPUTO dia mbola manana ny fahefany , izay ao anatin’ny Accords tany SANTON ary niteraka ny « esprit et la lettre » de la feuille de route , ary inrindra tsy potiky ny frantsay sy ireo malagasy toa an-dry kintanaanandrambo izay nikiakiaka fa tsy ilaina izany accords de MAPUTO izany ( 22 janvier 2011 ita ao amin’ny soratra nataoko mitondra ny lohateny hoe : aoka izay ny kitoatoa !)
Mbola misy ireo malagasy sadasada mikroka izay fomba handinganana ny feuille de route !
Izany hetsika izany no nanosika ireo miaramila mahasy milaza fa tsy manaiky ny fodian’ny Filohan’ny Firenena izy ireo..!
Mikasika ny fihatsarahimbelatsihy an’ireo forumistes isika , izay miseho mankasitraka ny fodian’ny Filohan’ny Firenena , fa tsy mampiseho ey tolona ataony hahatanteraka izany..Fa hain’izy ireo ny miteny teny foana , teny tsy misy fifandraisana amin’izany fodiana hilatsaka ho fidiana izany..
Mba diniho tsara anie ny resaka ifanaovan’ireo mpitsaera é ! Tsy saina no tsy misy toa finaritra izy ireo eso , ny kilalao-teny tsy mankaiza ,resaka ambony tamboho !
Ireo mpitsera ireo anefa no mba heverin’ny Malagasy any Antanindrazana fa hitondra ho azy i
1 novembre 2012 à 18 h 45 min
tapaka..ity ,ny tohiny..
« Ny Malagasy any Antanindrazana ,izay tsy manana loharano-bavao , dia miadry ny mpitseara aty ivelany mba hanome ny heviny , ny fijeriny , ny fanadihadiany , by soso-keviny !
Tsy milaza izany mitompo-teny fantatra izay manao izany na misekoseko fa fifanampina izany !
Koa tsy tsara ny mitsaratsara , na manaratsy ny soratra ataon’ny sasany…!
Ny tenin’ireny mpanaratsy ireny dia toa ny olona mandro mitsilany.., miverina aminy ny teny tatsy ataony..Hahabotrabotra azy izany !
Maro ny fomba aezontsika entina manampy ny Malagasy..
Itony serasera itony ,raha hatao am-pitiavana sy am-pahatsorana dia hahavitana zavatra lehibe sy maro..
Mila fampaherezana izy ireo amin’izao fotoan-tsarotra izao !
Aza mitomany ry Malagasy fa mijoroa sy mahatokisa a ‘ANDRIAMANITRA !
Mahereza fa ts lavitra ny afo ny kitay entintsika ka hiredareda ny afo -pifaliantsika !
Précédent Article précédent : Me RAKOTOMAVO RAZAFIMANANTSOA HANITRINIAINA : TSY MAINTSY TONGA ETO NY FILOHA RAVALOMANANA
Suivant Article suivant : MITAKY NY FIALAN’IREO JENERALY MISAKANA NY FODIAN’I DADA NY VAHOAKA